Internal Kuputika Preventers
The Nhanganyaya pamusoro Shock Sub Drilling
by pamusoro 19-03-27
The kuvhunduka dzesub kuchera kunokudziridzwa kuti agopfigira chibooreso tambo kubva axial deflections vakasikwa zvishoma kuburikidza kuchera akavhiyiwa uye nokudzivirira zvishoma rokurara Shongai kuburikidza kuchera kushandiswa. The turusi achava yekubata kuvhunduka mutoro akapoteredza chibooreso tambo uye boora wedzeredzei. Anosanganisira H ...
Hydraulic vavezi vematombo-zvikuru richikunda zvishandiso ari pamusika
Sezvo anozivikanwa kuna vose, kuti zvemaziso womukati aricheke dzinowanzotsigi- akashandiswa incision ari zvimwe zvikamu pamusoro downhole chavasina mutopota, akadai kugadzirwa zvemichina tambo, chibooreso mbiru uye zvichingodaro. Sezvo zvakanaka, kana kushandisa zviri nenguva nokuveza zvekufuga bhegi azvikuya casing kuti casing kuvaka, pamwe ...
Mutsindo Variations pamusoro Cordless Drills
Chimwe chezvinhu hwokufananidzira chinangwa drills vave vari rwekushanda nesimbi, kuveza, kukura uyewo DIY mabasa. Uchawana drills akaita kunyanya kushandiswa mune zvokurapa, nzvimbo ubanguranyika uye kunyange nedhaimani mugodhi. Uchaona drills makuru uye tudukuduku drills uyewo kushanda infinites ...
World Oil Kudiwa
World Oil Raidiwa Highlights (13 November 2015) * Tapota cherechedza kuti Highlights aya kubva ichangoburwa Oil Market Report, iyo ukasunungurwa zvakazara subscribers chete - maererano purogiramu iyi pamwedzi. Non subscribers usununguke mukana ichangobva Highlights chaiyo ichi, zvisinei ...
Energy chibooreso Ezvemutauro
Vanowanzoororwa wakashanda kubudikidza manually kana Magetsi. Zvinokwanisika uyewo kushandisa muchina uyu ave sikurudhiraivha. Unofanira chete kuisa sikurudhiraivha yokutenda kuti muchina uyu kurishandisa somunhu sikurudhiraivha. The Drilling michina zvinowanikwa siyana siyana kunobva pamusoro wayo kushayiwa. The dzakasiyana-siyana ...
Reverse kuparadzirwa (RC) kuchera anoshandisa hunyambiri-akavakirirwa chibooreso nyere (tsvimbo) pamwe hwakasimba chibooreso ikakuruma kubudisa buri rimwe nokuumbwa uye anonunura dombo Chips (cheka) pemvura kuti tevera kuongorora. The Drilling mashandiro ari pneumatic reciprocating pisitoni (sando) kutyaira tungsten-simbi D ...
Roller reamers vanoshanda mu hakunakidzi akavhiyiwa kuti mafuta & gasi indasitiri. The chikuru basa chinotenderera reamers akacheka pasi idzodzo kuti vawedzere Houses to Rent kune zvinodiwa kukura panguva drilling zvakanaka oparesheni, izvo zvingava yepakutanga kukura chibooreso zvishoma panyaya apo chibooreso ikakuruma W ...
Downhole Mud Motors Kune mhando mbiri makuru downhole Motors dzinofambiswa ne madhaka aibuda; 1) The turbine, riri izwi rinoreva Centrifugal kana axial pombi uye 2) The zvakanaka misha madhaka injini (PDM). Misimboti kushanda vari kuratidzwa Figure uye pamasikiro chishandiso vari yakatosiyana. ...
Kuvhundutsa Sub Drilling Danho, Two-Way Shock Sub, Fishing zvirongo, Fishing Tools, Bhamba Sub Fishing Danho In Drilling, Reverse Circulation Junk Basket,